Nooca Xianglong G Taleefoonka gacanta loo adeegsaday Isgaarsiinta Khatarta ah-News-Yuyao Xianglong Isgaarsiinta Warshadaha Co., Ltd.
Qaabka Xianglong G Taleefoonka gacanta loo adeegsado Isgaarsiinta Khatarta ah
Waqtiga: 2020-09-23 Hits: 25
Waa Maxay Isgaarsiinta Meesha Khatarta ah？
Aagga halista ah waxaa loola jeedaa aag inta badan la ururiyo gaasaska ololi kara ama qarxa, uumiga, boodhka ama waxyaabaha qarxa.
Jawiga shaqada ee halista ah, nabadgelyadu kaliya maahan mudnaanta - waa shuruud. Marka shaqaalaha loo dirayo meelaha halista ah, isgaarsiinta heer sare ah ayaa fure u ah hubinta inay ahaadaan kuwo nabdoon. Laakiin isgaarsiinta saxda ah waxay sameyn kartaa wax ka badan oo kaliya hagaajinta amniga shaqaalaha; waxay sidoo kale si weyn u kordhin karaan waxtarka, taasoo horseedi karta dib u soo laabasho weyn oo ku timaad maalgashiga ururkaaga.
Maxay Tahay Loolanka Loogu Jiro Xaaladaha Aad U Xun?
Meelaha halista ah waxaa lagu qeexaa sida oo kale xaaladdooda daran awgeed. Badanaa, shaqaalaha ka shaqeeya goobta waxay ku xiran yihiin kuleyl xad dhaaf ah, qoyaan, gariir, jolts, iyo nooc kasta oo roog ah. Waxay ubaahan yihiin qalab kushaqeynaya jawigaan dhexdiisa maxaa yeelay marka qalabka isgaarsiinta uu xumaado, waxsoosaarka ayaa istaaga.
Muxuu Xianglong sameyn karaa si uu u xaliyo?
Aaladaha shaqaalahani ay adeegsadaan waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo adag oo qallafsan sida deegannada laftooda. Xianglong G qaabka taleefanka gurmadka degdegga ah waxaa loogu talagalay jawi dalbasho leh qiimeyn IP67. Tani waxay ka dhigan tahay inay u adkeysan karaan dhammaan naxdinta, dhibcaha, gariirka, qoyaanka, iyo heerkulka ay shaqaalahaagu dhigayaan.
Bixinta adeegsadayaasha soosaaraha alaabada sare ee qancisa ayaa had iyo jeer Xianglong ka raadinaysay isaga oo ku tiirsan horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyadda.
Haddii aad sidoo kale raadineyso furaha noocan ah mid ka mid ah mashruucaaga, fadlan nala soo xiriir annaga oo aan ka labalabeyn!
Hore: Kiiboodhka Warshadaha IP65 Kiosk Birta leh Trackball ee Loo Adeegsaday Kiisaska Dadweynaha
Xiga: Sidee loo kala saaraa Rakabka Duulista ee Ragga iyo Dumarka？
Xuquuqda daabacaadda © 2020 Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd. P ICP 备 14038347 号 -1